PressReader - Ilanga: 2019-01-07 - UHULUMENI USHAYE ECELENI KAKHULU NGOKUTHAMBISA AMATOMU KWEZEMFUNDO
UHULUMENI USHAYE ECELENI KAKHULU NGOKUTHAMBISA AMATOMU KWEZEMFUNDO
Ilanga - 2019-01-07 - Imibono - Sandile Madlala UMLAZI
MHLELI: YIZE osopolitiki nezincelebane zabo bengazama ukuyichaza le nsambatheka yokuphasa kwezingane ngo-40% no-30%, kodwa ngeke iyeke ukuba yinsambatheka. Ngaphambi nje mhleli kokuba ngibeke uvo lwami, ngicela ukubongela abantwana abaphase umatikuletsheni, besengithi kulabo abangaphumelelanga, lisekhona ithuba, mabazame futhi.
Okungidabukisayo-ke, wukuthi kwazona lezi zingane eziphasile iningi lazo ngeke lizithole izikhala emanyuvesi ngezizathu eziningi, esinye sazo yilama phuzu aphansi ngendlela emangalisayo osekuphaswa ngawo.
Nale nto yokuthi umfundi aphushwe ngisho kucaca ukuthi akafeyilanga ubhubhile, ngibona izothuntubeza izinga lokuzimisela nokucabanga ezinganeni ezimpisholo. Ngithi ezimpisholo nje ngoba
ku-90% ezikoleni zazo. Abanye-ke abantu ubezwa bebuza uku-
njengezezinye izizwe, ngivele ngidabuke. Izingane zezinye izizwe iningi labazali bazo lifundile, limi kahle okwenza kube lula ukuba lisizane nengane ezifundweni zayo, likwazi ukuyikhokhela ukuba yenze amakilasi engezizwe ukuzithuthukisa. Ezethu izingane ziphuma esikoleni umzali eyongena ebusuku emsebenzini futhi kwamali ayiholayo uhluleka ngisho wukuyikhokhela esikoleni saselokishini.
Ngokwami ukubona, uhulumeni unyathele onqenqemeni lwentaba ngokuthambisa amatomu kwezemfundo, okuyothi mhla uwa, uthi bhu nabo bonke abantu bakuleli lizwe.
Kumuntu ozibukisisayo izinto, sekuyacaca manje ukuthi osopolitiki bathanda ukushayelwa ihlombe ngisho ngamanyala. Umnyango wezemfundo ngiwubona ufuna ukuthweswa izimendlela ngayo yonke indlela, ngisho nezolimaza imfundo yezingane zethu.
Kuthiwa izingane mazidudulwe - ngoba zizompintshana uma zilokhu ziphinda amakilasi - kuthiwa maziphase ngo-30%, uma ibhalile ingane yabheda kuthiwa izamile uthisha ayimakele kahle! Wawukuzwaphi ukuthi umuntu kuthiwe makathi “Nkosi” yena athi “Gosi” kuthiwe uzamile?
Okubajabulisayo nje kuhulumeni wukuthi yinqwaba ephasile, ukuthi iphase kanjani, kawunandaba. Kwayona nje indlela yethu yokufunda, kulesi sikhathi sobuchwepheshe, kufanele ngabe sekunezifundo zobuchwepheshe ingane eziqala esikoleni samabanga aphansi.
Izingane zidlala ngamathoyizi - amanye asebenza ngogesi namabhethri - nangomakhalekhukhwini, kufanele manje ngabe ziyafundiswa esikoleni ukuthi uma ithoyizi linenkinga lilungiswa kanjani, hhayi le nto yokuthi izingane ezimnyama ziye esikoleni
Uma ingane isiya enyuvesi, kudume upotiyane ngoba kwasiNgisi lesi ebisigqishwa kasigqishekanga. Uma singahlonipha imfundo yethu, siyihlele ngendlela ezohlomulisa izingane zethu, kangingabazi ukuthi amakhono azo angenza lukhulu ezweni. Lena kodwa yokwenza izinto - kwehliswa amamaki okuphasa - ngoba abantu bafuna ukuthandwa kwezepolitiki, ngeke iliyise ndawo izwe.
ISITHOMBE NGABE: ACCLAIMED IMAGES
UMFUNDI uthi kubalulekile ukuba imfundo ihlelwe kahle. Uthi izingane sekumele zifundiswe zisencane ngezifundo zobuchwepheshe, kwazise zidlala ngamathoyizi - amanye asebenza ngogesi - zifundiswe ukuthi alungiswa kanjani hhayi ukudlala nje kuphela.